2021 Plug-N-Play HHO Kit yezimoto, amaloli Ayonga I-Fuel — HHO FACTORY, Ltd
Ama-2021 New iX HHO Kits All-In-One Plug-N-Play
Izimoto, ama-SUV iX 20 HHO Kits Okokhelekayo Konga Kuze kube ngu-47%
Izinjini ezifika ku-1500cc
Ikhithi ye-HHO iX10
I-HHO Generator 8 LPH
Izinjini ezifika ku-2500cc
Ikhithi ye-HHO iX20
I-HHO Generator 16 LPH
Izinjini ezifika ku-5000cc
Ikhithi ye-HHO iX40
I-HHO Generator 32 LPH
Izinjini ezifika ku-10 000cc
Ikhithi ye-HHO iX80
I-HHO Generator 64 LPH
IHHO kit yezimoto, amaveni, ama-SUV
Ama-HHO Kits Amaloli, Izikebhe
Izikebhe ze-HHO zezikebhe, ezolimo, imishini
AmaHHO Kits for Generators
I-Plug-N-Play esheshayo noma i-DIY
Sithumela emhlabeni wonke nge-UPS
Thumela isithombe noma amavidiyo kuze kufike ku-2GB
Ama-generator amasha we-2021 Cathode Anode iX HHO awasasebenzisi amapuleti angathathi hlangothi
Ukhathele ukukhuphula amanani entengo kaphethiloli? Ngabe ufuna ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-30% yemoto yakho nokuningi noma ukunciphisa ukungcoliswa kwemoto yakho (CO, CO2, SOx neNox)? Ngemuva kwalokho ufike endaweni efanele!
IHHO-FACTORY, Ltd. isungule uhlelo olusha lwe-ALL-IN-ONE olukuvumela ukuthi wonge uphethiloli omningi, ngakho-ke, imali eningi ngentengo ephansi.
Sebenzisa uphethiloli ojwayelekile bese uyihlanganisa namandla e-hydrogen (i-oxyhydrogen). Uhlelo lwethu lwe-ALL-IN-ONE olune-PLUG-N-PLAY luyindlela esheshayo futhi ehlakaniphile engadingeki ukufaka nokuphuma kwenye imoto nganoma yisiphi isikhathi.
Indlela uhlelo lwethu olusebenza ngayo ilula njengoba inobuhlakani. I-Electrolysis esitokisini sethu ihlukanisa amanzi (H2) avela ku-oxygen (O), kuthi i-hydrogen (igesi i-oxyhydrogen) ekhiqizwa yile nqubo yengezwe ngqo ekufakweni komoya kwenjini.
Irhasi ye-electrolytic (i-hydrogen) iqinisekisa ukucoceka futhi, ngaphezu kwakho konke, isebenza kahle kakhulu, cishe amandla omlilo angenazo izinsalela futhi inciphisa ukukhishwa kwe-CO2. Uhlelo lufanelwe ngokulingana nezinjini zikaphethiloli nedizili nezimoto ze-LPG ezisebenzisa igesi yemvelo.
Alukho ulwazi olukhethekile lwangaphambili oludinga uhlelo lwethu olusebenziseka kalula lwe-ALL-IN-ONE PLUG-N-PLAY ukuze nje luxhume emotweni. Imiyalo yokufaka ekhonjisiwe, njengakwincwadi yokuxhumana, iyabambeka kakhulu.
IZINZUZO ze-HHO iX-CELL
1. Nciphisa ukusetshenziswa kukaphethiloli kuze kufike ku-30% noma ngaphezulu emgwaqeni omkhulu noma ethrafikhi yedolobha.
2. Ukusebenza kwemoto yakho kuzothuthuka kakhulu.
3. Ukukhishwa okungaphansi kwe-CO 2 nokushisa okumsulwa okungcono kumvelo.
4. Ukukhishwa kwe-Carbon monoxide kuzoncipha.
5. Ukushisa kwenjini yakho kuzokwehla.
6. Impilo yenjini yakho izokwelula.
7. Izinjini zihamba bushelelezi ngenxa yomlilo osebenza kahle ngohlelo lwe-hydrogen.
Qala ukuthenga amaloli
Amavidiyo we-Hydrogen HHO Technology
Bhalisa futhi ube ngowokuqala ukuzwa ngokuqaliswa komkhiqizo omusha!
Londoloza 25% Londoloza 25%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + Ubuningi
Ungahlukıselana Ne Facebook Tweet on Twitter Ungahlukıselana Ne LinkedIn Pin on Pinterest
Ilungele ukusetshenziswa emizuzwini engu-5, Akudingeki Ukufakwa: I-HHO generator 20 X-Cell, PWM, tank yamanzi enezinga le-level, Bubbler, Display, Smart relay voltage detection, User-Friendly - Unrivaled benefits of the HHO X-CELL with PWM .
Akukho ukufakwa kwe-bumper okudingekayo, I-HHO X-cell yi-HHO KIT encane kunazo zonke futhi encane kunazo zonke, i-All-In-One, i-Plug N 'Play eyake yenziwa e-Ireland EU yi-HHO FACTORY, i-Brand new 2V PWM 66W, i-CELTIC TIGER ™ isebenzisa i-KOH ephezulu , Imitha emine ye-LED: wattmeter, voltmeter, ampermeter, amandla aphelele, 6-100V 20A; Amandla okuzenzakalelayo KU-HHO X-Cell lapho injini isebenza; Setha ukubambezeleka kokulawulwa kokudluliswa kwemoto ngemuva kokuthi injini itholakele; Amandla we-Auto OFF HHO X-Cell lapho injini icishiwe; Ikesi le-aluminium elisindayo elingenamanzi nge-Plug-N-Play; I-PWM isebenza ngokuzenzakalela nge-maximum yamanje ne-KOH - lokhu akunakwenzeka ngenye i-PWM nohlobo lwama-generator !; Uzizwa ukhululekile futhi ungenamkhawulo, ngaphandle kokushisa ngokweqile, ngaphandle kokugcwala ngokweqile, Amakhithi amasha we-X-Cell HHO afanele ukushisa okushisayo okufika ku-50 ° C, Akudingi ingxube ye-antifreeze kuze kufike ku -60 ° C.
Amajeneretha ETHU AMAQINISO EHYDROGEN HHO
I-HHO FACTORY, Ltd - I-HHO-X-CELLS Ehlanganisiwe
Senze ucwaningo lokuhlola umthelela wokwengezwa kwenhlanganisela ye-hydrogen-oxygen (etholwe emanzini abolile ngogesi) emoyeni wokungenisa we-single-cylinder injini ejwayelekile yedizili. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-hydrogen ngokusebenzisa umgudu oyisilinda wenjini kadizili ithuthukisa inqubo yokusha komlilo ngenxa yezakhiwo eziphakeme ze-hydrogen uma iqhathaniswa namafutha avamile.
Landa isifundo se-NASA Research
LUSEBENZA KANJANI UHLELO LWE-HYDROGEN EMOTWENI YAKHO?
Ucwaningo lwe-Hydrogen lukhombisile ukuthi ukufaka i-hydrogen kuzinjini zomlilo kunciphisa kakhulu ukukhishwa kwe-CO 2.
Injini yomlilo yangaphakathi iguqula amandla amakhemikhali kaphethiloli ngokusebenzisa amandla omlilo abe umsebenzi womshini. Umlilo wenzeka ekamelweni lomlilo, elokhela ingxube kaphethiloli nomoya ozungezile. Ukunwetshwa okushisayo kwegesi yomlilo oshisayo kuhambisa ipiston. Amandla avelayo anika amandla imoto.
Izibonelo ezaziwa kakhulu zezinjini zomlilo injini ye-petroli nenjini kadizili ezimotweni. Ngokusetha kahle injini, umlilo omuhle kakhulu kwenzeka lapho i-piston isifinyelele i-TDC. (TDC = top dead center, highest piston position in the cylinder) Kodwa-ke, izinjini eziningi zizokhela ngokushesha, okusho ukuthi uphethiloli awushisi ngokuphelele, okuholela ekusetshenzisweni okuphezulu kukaphethiloli kanye nokukhishwa kwe-CO 2 okuhambisana nakho. Umthelela ophakeme wemvelo! Ngokwengeza i-hydrogen (i-oxyhydrogen gas) engxenyeni ye-fuel-air, umfutho ophakeme ufakwa kuma-piston, okuholela ekushiseni okusebenza kahle kwephethiloli, okuholela ekongeni uphethiloli nasekungcoleni okumbalwa.
Ngokufakwa kohlelo lwethu olulodwa, ungayiguqula imoto yakho ibe yimoto ye-hybrid ebiza izindleko eziphansi futhi, uma kunesidingo, uyibuyisele esimweni sayo sokuqala ngaphandle kokulahlekelwa yinani.
HHO FACTORY, Ltd - Ucwaningo
Izinzuzo ze-Plug-N-Play All-In-One Hydrogen Kit:
Ama-plug-N-Play Hydrogen HHO kits ubuchwepheshe obusha obusha obenziwe yiHHO FACTORY, Ltd obuhlangabezana nezidingo zamaFrance ukunciphisa izikweletu zabo zikaphethiloli noma zikaphethiloli. Akukho ukufakwa okudingekayo, akukho lwazi lobuchwepheshe kumakhenikhi nasezindlekweni, ikhithi yemoto yeHydrogen ingafakwa wedwa kuzo zonke izimoto zesimanje noma zakudala. Lapho ikhithi le-All-In-One Plug-N-Play selikulungele ukusetshenziswa emizuzwini embalwa, i-hydrogen ixutshwa nophethiloli nge-electrolysis kanye nokusabela kwamakhemikhali. Kutholakala ingxube ye-hydrogen ne-oksijini, eyondliwa ekamelweni lomlilo lenjini ngokudla, lapho i-hydrogen yomlilo ikhiqiza cishe u-100% wokonga uphethiloli.
Senze i-HHO iX-Cell entsha yesimanje enobuchwepheshe be-cathode-anode yama-hydrogen kits, enenzuzo kunezinye izixazululo ezindala ezingasafaneleki njenge-Dry Cell. Ayisadingi amapuleti angathathi hlangothi ngaphandle kokukhiqizwa kwe-hydrogen. Lesi sixazululo sinciphise ubukhulu bomzimba we-hydrogen kuze kube kane, futhi siphinde sahlanganisa i-bubbler, ithangi lamanzi kanye nenzwa yezinga lamanzi ne-signalisation kudeshibhodi. Ngale ndlela, sisuse ukufakwa okuyinkimbinkimbi okudingekayo kuma-cell cell owomile. Ngale ndlela, ngobuhlakani saxazulula ukufakwa okuyinkimbinkimbi okudingekayo kuma-cell cell owomile lapho ingekho indawo efanelekile.
Ziyini izinzuzo zobuchwepheshe obusha be-HHO iX-Cell 2021 obusha?
> Khulisa amandla enjini
> Ukusheshisa impendulo ngesikhathi sokushesha
> Ukunweba impilo yenjini
> Ukwehliswa komsindo wenjini
> Ukuncishiswa kwe-CO, CO2, i-SOx ne-Nox,
> Ukususwa okusebenzayo kwe-carbon deposit
Ama-HHO iX-Cell hydrogen kits, enye indlela engasebenzeli imvelo kumandla avuselelekayo, ahlangabezana ngokuphelele nezidingo zezinkampani zanamuhla ukunciphisa ukungcoliswa komoya futhi ngaleyo ndlela kube nomthelela ekuthuthukiseni indawo esimeme. Umthengi osebenzisa lobu buchwepheshe obukhulu obukhiqiza i-hydrogen mahhala uzosindisa imvelo futhi angcolise imvelo kancane!
Ama-All-In-One Hydrogen HHO kits athuthukisa ukushisa kukaphethiloli:
I-plug-N-Play hydrogen kit isivumela kanjani ukuthi sinciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli? Izinjini zisebenza ngama-piston ahamba aya ngapha nangapha ngejubane elikhulu, futhi lapho i-piston ibuya, isikhala esivulekile siyaxazululwa ukumunca umoya nophethiloli egumbini lomlilo wenjini. Njengoba i-piston iqhubeka nokusebenza, ingxube yomoya nophethiloli iyacindezelwa, futhi lapho isendaweni yama-spark plugs, ukushisa komxube kusebenza kahle. Kusebenza kahle enjinini lapho umlilo uvutha kuphela lapho ukucindezelwa kwepiston kufinyelela phezulu. Kodwa-ke, ezinjinini eziningi, umlilo uvutha sekwephuze kakhulu, nophethiloli awudli ngokuphelele.
Lokhu kushoda komlilo kuyalungiswa ngokufaka i-hydrogen kuphethiloli, ukwandisa i-octane nokucindezela ingxube yomoya / kaphethiloli kuholele ekushiseni okuphezulu kukaphethiloli. Ikhithi ye-HHO hydrogen ikhulisa ukushisa kwanoma yimuphi uphethiloli, inciphisa i-CO, i-CO2, i-SOx ne-Nox emissions kanye ne-carbon deposits ehlotshaniswa namandla omlilo angasebenzi kahle.
Lesi senzo esisha se-HHO Carbon Cleaning sibuyisela injini yakho 'Hlanza njengesha'.
I-Ireland esekwe i-HHO FACTORY Ltd. igxile ekuletheni ubuchwepheshe be-hydrogen obunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni ezimakethe zomhlaba wonke. Ama-generator e-HHO enza izinto ezintsha ekwakhiweni kwawo, ngokusebenza kahle kakhulu kuma-amps aphansi, ngokugxila okuyinhloko ekwehliseni ukukhishwa kwekhabhoni nokubuyisa ukusetshenziswa kwephethiloli okungcono ngokuhlanza injini yakho ngaphakathi nangaphandle. Uma utshala imali yakho oyisebenzele kanzima kwi-HHO Factory HHO Generator, uthola ukuhlolwa okucwaningwe ngokuphelele futhi kucwaningwe ngokuphelele, okuyi-Plug-N-Go User-Friendly Ready-to-use, eyenziwe e-Ireland, isiqeshana semishini esezingeni eliphakeme. Idizayinwe ngokunakekela futhi yahlanganiswa ngokunemba, konke kususelwa ekuhlolweni okuphelele komhlaba wangempela nasekuhlaziyweni kwedatha, yonke i-HHO Factory HHO Generator izokwenza njengoba nje ithenjisiwe, uma usuyifakile kahle, ngokuya ngemiyalo namavidiyo. Onke ama-HHO Generator Kits nawo wonke ama-'Plug n 'Play amayunithi e-EU avikelwe yi-EUIPO - I-European Union Intellectual Property Office.
Kungani i-HHO Kit ichazwa njengomhlanzisi wekhabhoni osebenzayo we-HHO?
Umphumela osebenzayo wenqubo yokuhlanza nge-Active HHO carbon cleaner (HHO Kit) ukuthi abasebenzisi basitshele ukuthi bayabona futhi bazizwe izinjini zabo zibuyiselwe ukuletha umnotho wephethiloli ongcono. Ngama-generator ethu we-HHO X-CELL, awudingi ukuguqula noma ukuphatha i-ECU yakho ukuthola amandla noma umnotho wephethiloli. Amazwe amaningi ayakwenqabela ukusebenzisa noma iyiphi i-chip noma inzwa yokuguqula amadivayisi ukuphatha imininingwane ngoba kuvame ukukhuphula ukukhishwa kwekhabhoni okuyingozi futhi kunganciphisa ubude benjini, kulimaze ikakhulukazi i-alternator enqubo. Kufanele unakekele ukuthi ungazibandakanyi namaseli we-HHO angahloliwe, angenamsebenzi enziwe ngokunganaki kumklamo wakudala. Lezi zivame ukwakhiwa ngaphandle kokuhlolwa kwesayensi, futhi imvamisa, zinamapuleti amaningi angenamsebenzi angathathi hlangothi, ngakho-ke okuwukuphela kwendlela yokunqoba ukuntuleka kwabo kolwazi lobuchwepheshe ukugcina ukukhulisa ama-amps ahanjiswa emapuletini. Ibhethri kanye ne-alternator kufanele basebenze kanzima kakhulu ukuletha lokhu okwamanje, futhi noma yikuphi ukonga okwenziwe ngegesi ye-HHO kusetshenziselwa ukushayela enye i-alternator. Vele, ungalindela ukuthi enye i-alternator nebhethri lakho libe nempilo yokusebenza efushane kunqubo. KULUNGILE !, Ngakho-ke yizinto ezimbi lezo. Futhi udinga ukukwazi ngoba kukhona amanye ama-HHO Generators angakhona laphaya angakulungele ukwenza injongo.
IQINISO LABO linezindaba ezinhle! Kuqinisekisiwe!
Inzuzo enkulu kuwe, nasenjinini yakho ukwehliswa kokukhishwa, nokubuyiselwa kokusebenza kahle kwenjini okushisa uphethiloli nodizili. Ifektri ye-HHO manje isiyatholakala ama-HHO X-Cell Generator HHO kits ethu akhiqizwe ngo-2019 futhi akhiqizwa yi-HHO FACTORY, LTD khona lapha e-Ireland. Lawa makhithi asebenzisa amandla aphansi kakhulu we-200mA kuya ku-1.5 A ukuthola umphumela omuhle ekwehliseni ukungcola, ukukhulisa amandla nokubuyisela ukusetshenziswa okungcono kwephethiloli kunjini yakho encane naphakathi. Futhi lokho kuphelele ocwaningweni lwe-HHO FACTORY's obsessive, ukuhlolwa okungapheli kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo komklamo
---------------------- KANYE ------------------------
I-HHO Generator igxilisa amanzi e-ionized ku-Oxygen neHydrogen Gas. Igesi le-hydrogen negesi yomoya-mpilo zithuthukisa ukushisa kwengxube yakho kaphethiloli ukuyisiza ishise ngokuphelele. I-HHO Gas isheshisa ukusakazeka kwelangabi ngaphakathi kwekamelo lakho lomlilo, inikeze isikhathi esiningi sokusha (ngoba iqala ngokushesha futhi ishe ngokuphelele) ngaleyo ndlela ibangele ukushisa okuphelele kukaphethiloli. Lokhu kusebenza kahle kunika amandla amaningi kusuka kuphethiloli wakho, ukujikeleza ngakunye kwe-crankshaft, futhi ungasheshisa ngokushesha okukhulu uma ukhetha noma ushayela ngobumnene futhi injini yakho izosebenza ngokwengeziwe kuphethiloli. Awudingi inani elikhulu leHHO Gas, kepha udinga inani elifanele, elethwe ngendlela esebenza kahle kakhulu futhi enembile. Futhi yilokho kanye ikhithi ye-HHO X-Cell Generator HHO esebenza kahle kakhulu.
Bheka uhlelo lokusebenza lokusheshisa ukuze uvivinye ngaphambi nangemva kokusebenza kwenjini yakho, ngakho ungaqiniseka ukuthi uthenge iJenerator yeHHO eyenza umehluko wangempela enjini yakho.
Kusebenza kanjani Ukuhlanza i-Carbon?
I-HHO Gas (Hydrogen & Oxygen) iyasha ekamelweni lomlilo iphinde ibuyele emanzini (H2O), kepha iyashisa kakhulu ekamelweni lomlilo, empeleni amanzi aba umusi oshisayo noma umusi wamanzi ashisayo. I-Water Vapor ayibonakali njengoba ivela ekuqothulweni kwakho, ngakho-ke ngeke wenze ifu elikhulu lesiphepho njengoba ushayela phansi ngomgwaqo.
Ukuhlanganiswa kwesilinganiso sezinto ezihlanganayo ezinjini zokugaya zangaphakathi kunganamandla okukhiqiza ukuphuma kwezinga eliphansi kanye nokusebenza kahle okuphezulu kwezizathu ngezizathu eziningi:
I-oksijini eyeqile ekhokhweni ifaka ngaphezulu i-hydrocarbons engashiswanga kanye ne-carbon monoxide;
I-oxygen eyengeziwe yehlisa izinga lokushisa eliphakeme lokushisa, okuvimbela ukwakheka kwama-oksidi e-nitrogen;
Amazinga okushisa aphansi omlilo akhulisa ingxube ethile yokushisa ngokunciphisa ukulahleka kwenetha lokuhlukaniswa;
Njengoba isilinganiso esithile sokushisa sikhuphuka, umjikelezo wokushisa okushisayo nawo uyakhuphuka, okunika amandla umnotho wephethiloli ongcono.
Kwabakhiqizi bezimoto, iHydrogen iyisengezo sikaphethiloli esingakhuphula kakhulu umnotho wamafutha kanye nokusebenza kahle ngenkathi inciphisa ukungcola komoya. Ngokungafani neminye imithombo yamandla ehlukile, i-Hydrogen ubuchwepheshe bokuziphendukela kwemvelo obudinga ukuguqulwa okuncane kakhulu ezinhlelweni ezikhona ukukhiqiza izinzuzo ezinkulu.
Ngithenge le hho super, efakiwe, konke kusebenza kahle. Ikhithi enhle kakhulu. Ngiyabonga!
Sawubona ku-HHOKit Factory, evela kuBrian-Andrew. (I-Silver Renault Espace ukufakwa kwevidiyo ku-HHOKit Website) NGIMANGALISIWE NGIJABULISILE !!!
UBrian-Andrew. (Ukufakwa kwe-Silver Renault Espace Video
ngidlulise ukuhlolwa kwami ​​kokukhishwa manje manje ngiyabonga ngizokuncoma kozakwethu
isivivinyo sokukhishwa kukajohn sligo
Ngeneliseke kakhulu ngemikhiqizo yobungcweti futhi ngisekela ngokushesha okukhulu nangobungcweti. Ngibona kakhulu.
Ikhasi lokuqala le-HHO elingisizile ukuthi ngibone OCHWEPHESHE BE-HHO !!! Ngiyabonga
Sebenzisa lesi sigaba ukusiza amakhasimende ukuthi athole imikhiqizo ayifunayo.
I-Plug-N-Play HHO Kit iX20 Predator <2.5L
Intengo yoqobo € 513.00
Intengo yoqobo € 513.00 - Intengo yoqobo € 513.00
Intengo yamanje € 386.00
€ 386.00 - € 386.00
I-Plug-N-Play HHO Kit iX40 Predator <5L
Intengo yoqobo € 635.00
Intengo yoqobo € 635.00 - Intengo yoqobo € 635.00
Intengo yamanje € 478.00
I-Plug-N-Play HHO Kit iX80 Predator <10L
Intengo yoqobo € 883.00
Intengo yoqobo € 883.00 - Intengo yoqobo € 883.00
Intengo yamanje € 664.00
€ 664.00 - € 664.00
Sakha ubuchwepheshe be-HHO-X-CELL obungakabikho emakethe. Singobunjiniyela ezingeni eliphakeme le-Plug-N-Play. Ilungele ukusebenzisa ngemizuzu eyi-10, ayikho i-R ...
I-FAQ - Umbuzo Obuzwa Njalo - HHO FACTORY, Ltd.
Ama-All-In-One iX HHO Kits Thin HHO iX-CELL Plug-N-Play Amadivayisi we-Hydrogen
Ama-plug-N-Play Hydrogen HHO kits ubuchwepheshe obusha obusha obenziwe yi-HHO FACTORY, Ltd obuhlangabezana nezidingo eziphakeme zama-Irish, amaNgisi, amaFulentshi, amaJalimane, amaNtaliyane, abaseSpain, abase-Australia, abaseMelika, abaseSaudis ukunciphisa izikweletu zabo kaphethiloli noma uphethiloli. Akukho ukufakwa okudingekayo, akukho lwazi lobuchwepheshe kumakhenikhi nasezindlekweni, ikhithi yemoto yeHydrogen ingafakwa wedwa kuzo zonke izimoto zesimanje noma zakudala. Lapho ikhithi le-All-In-One Plug-N-Play selikulungele ukusetshenziswa emizuzwini embalwa, i-hydrogen ixutshwa nophethiloli nge-electrolysis kanye nokusabela kwamakhemikhali. Kutholakala ingxube ye-hydrogen ne-oxygen, eyondliwa ekamelweni lomlilo lenjini ngokudla, lapho i-hydrogen yomlilo ikhiqiza cishe u-100% wokonga uphethiloli.
Imoto yami ayinaso isikhala esiningi ngaphansi kwehodhi. Ngizwile ukuthi iningi lama-generator ama-Dry Cell anzima ukufaka. Ngingayifaka kuphi kalula i-slim, All-In-One compact hydrogen generator HHO iX-Cell Kit?
Siqinisekisa ukuthi uzofaka i-Plug-N-Play iX HHO KIT entsha engenakulinganiswa ngokumane ufake ipulagi lazo zonke izimoto zesimanje nezakudala, amaveni, amaloli, izikebhe, imishini yokuhambisa umhlaba nama-generator kagesi. Umkhiqizi wethu omncane kakhulu we-iX-Cell hydrogen yiwona omncane kunabo bonke, ongcono kunabo bonke futhi ohlangene kakhulu emakethe, ngosayizi webhethri lesithuthuthu. Funda izincomo zamazwe anezinga lokushisa lansuku zonke elingu- + 30 / +50 ° C (86 ° F / 122 ° F) emthunzini. Faka i-HHO kit endaweni epholile phambi kwemoto, njengoba kukhonjisiwe amavidiyo emifanekiso.
Mangaki amaseli amapuleti akhiqiza igesi ye-HHO?
Amadivayisi wethu anamuhla we-HHO iX-CELL asebenza ngaphandle kwamapuleti angenamsebenzi angenacala, njengamaseli we-HHO omile athatha isikhala esiningi kuphela. Okuwukuphela kwamapuleti we-cathode nama-anode akhiqiza igesi ye-HHO. I-HHO X-CELL Slim nje u-4.5 cm isho ukuthi ama-cores amaningi anama-+ futhi - ikhwalithi ephezulu kakhulu ye-INOX A4 insimbi engagqwali 316 SS amapuleti ayafana nakwamaseli amadala we-HHO owomile (amafutha angama-25 cm), kepha ubukhulu be-generator ye-HHO buncipha kahlanu . Lokhu kwenza kube lula ukukhweza kunoma iyiphi imoto yesimanje lapho ingekho khona indawo yama-HHO cell cylinders noma ama-cubes owomile. I-PWM AMP Booster eyenziwe yiHHO FACTORY Co., Ltd I-Ireland iyanda ngokusebenza kahle kahlanu. Inzuzo elandelayo iyaphola ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke akukho kushunqa futhi kulayishwa ngokweqile. Amanzi okubuyisela kabusha anebanga elide ku-3000-5000 km (iseli elomile le-HHO linama-600-1000km kuphela).
Usigcina kanjani isixazululo ekuqandeni ngo -30 ° C -60 ° C, -22.0 ° F -76 ° F Isikhathi sasebusika saseCanada?
Ngaphandle kwe-antifreeze ne-KOH ephezulu kuze kube yilapho i-crystallization isilungele -60 ° C / + 50 ° C. Le nzuzo kungenzeka nge-iX HHO Kit Celtic Tiger esindayo engenamanzi i-PWM 66 kuphela.
Noma nini lapho isithwathwa esibi sizofika ngaphansi kwe-10-25 ° C, futhi ungazi ukuthi ungayilungiselela kanjani iyunithi enkulu ye-HHO ngaphansi kwe-30% -40%, unqamule futhi ususe ikhithi ephathekayo ye-HHO ukuvimbela umonakalo, uxhumane nathi, nathi sizokujabulela ukukunikeza imininingwane mahhala.
I-electrolyte ene-KOH eyomile 10 ml kuya ku-30 ​​ml, kuya ngevolumu nohlobo lwekhithi ye-HHO, isethwe ukuba ibe ngu-approx. -10 / -15 ° C. Lapho i-30 ml eyengeziwe ye-KOH eyomile ingezwa nge-100 ml yamanzi, i-electrolyte ayigodli ize ifike ku -30 ° C.
Ungaqala kuqala enkomishini encane egcinwe efrijini.
Esinye isisombululo se-antifreeze se-bubbler: Izingxube zamanzi-isopropyl zotshwala zinamaphuzu okuncibilika. Utshwala be-Isopropyl buya ngokuya bube buningi ngokushisa okunciphayo nokubanda ku -89 ° C (-128 ° F)
Enye indlela eya emanzini angabandisi kuma-Bubble we-iX wangaphandle?
Faka i-99.99% isopropyl alcohol njengesengezo se-iX Bubbler antifreeze kanye ne-detergent uma izinga lokushisa liwela ngaphansi kuka -30 kuye -50%. I-Isopropyl alcohol yengeza i-HHO bubbler yakho evimbela amanzi ekubandeni - 30% kuya -50%. I-Isopropanol ilungele ukwehlisa nokuhlanza imikhiqizo yasendlini yemvelo, i-solvent yokwenza i-crystallisation ku-antifreeze, izithasiselo ze-washer, ungqimba lwe-sweat, kanye nongqimba lwamafutha ukususa izipikili zokufakelwa nokunye okuningi.
Ngaphambi kokuqala injini, qiniseka ukuthi i-hose ayivinjelwe yiqhwa, indawo engalungile ye-valve yendlela eyodwa, noma i-hose ephukile ebangelwa ukufakwa okungafanele. Ukuvimba ukukhishwa kwegesi ye-HHO engalungiseki kubhubhisa iyunithi enkulu ye-HHO futhi akunakushintshwa noma kubuyiselwe imali.
iX10,20; iX40-iX80 Uyini umehluko?
I-thinnest yakhelwe i-approx 5 cm (2 inches) iX enobude obungu-15 cm kuphela eyegumbi elincane lenjini ezimotweni ezincane, ezinkulu zesimanje nezidala. Imodeli ye-iX10,20-40 enobude obungu-18 cm ilungele ukufakwa egumbini lebhethri lemoto elilingana no-18 cm ezimotweni, crossover, AUV, MPV, Van, SUVs.
Ibiza malini umakhenikha ukufaka i-Plug 'N' Play ne-DIY?
I-Plug 'N' Play Mounting / Ukufaka konke oku-in-one HHO iX-CELL kits yemoto yakho kungaba mahhala wedwa ngaphandle kwemishini. Silinganisela ukuthi Kukulungele ukusebenzisa leyo-plug-N-Play efakwe ngaphambilini ezohlala imizuzu engu-5-15.
I-DIY idinga ukufaka zonke izixhumi zikagesi, izintambo, ukudluliswa kwama-pin ayisihlanu, i-PWM AMP booster, izinto zokufaka, amapayipi ngaphandle kwe-4-in-1 Blue Display ne-Smart LCD Relay. Ukufakwa kungathatha amahora angama-3-5, kwezinye izimo izinsuku, futhi ekugcineni, ungadinga umakhenikha wosizo onentshisekelo kulo msebenzi.
Siyabona ukuthi amakhasimende ahlala efuna ama-generator amakhulu.
Ochwepheshe bomthetho weThermodynamic baqinisekisa ukuthi ukonga uphethiloli okumangalisa kakhulu kwenzeka lapho kudla ugesi omncane nokusebenza kahle okukhulu ngobuchwepheshe bethu beHHO iX-CELL kuzinjini zanamuhla zikaphethiloli nodizili.
Yini inzuzo ye-All-in-One iX Plug-N-Play entsha uma iqhathaniswa nohlelo lokuncintisana lwe-HHO generator system endala?
Ukuhluka kwezinhlelo zethu ezintsha ze-iX HHO ukuthi ithangi lamanzi, inzwa yezinga lamanzi, i-bubbler kanye ne-generator ye-HHO ziyi-All-In-One futhi azidingi ukufakwa.
Abakhiqizi bama-HHO generator ngaphandle kwe-All-in-One bayaphambanisa amakhasimende nezinkinga ngemuva kokufakwa futhi kudinga isikhala esengeziwe esiphindwe kathathu. Izikhathi eziningi lapho ikhasimende, ngemuva kokuthenga umkhiqizo, lithola ukuthi ukuhlangana akunakwenzeka.
Kusuka empendulweni yemishini, siqinisekisa ukuthi i-compact encane kunazo zonke emhlabeni enomthengisi ongcono kakhulu we-Plug-and-Play ifinyelela ezingeni eliphakeme kakhulu lokwaneliseka.
Kubiza malini umakhenikha ukufaka iPlug 'N' Play neseli elomile le-DIY?
Iseli elomile le-DIY lidinga ukufaka zonke izixhumi zikagesi, izintambo, ukudluliselwa kwamaphini amahlanu, i-PWM AMP booster, izinto zokufaka, amapayipi ngaphandle kwe-4-in1 Blue Display ne-Smart LCD Relay. Ukufakwa kungathatha amahora angama-3-5, kwezinye izimo izinsuku, futhi ekugcineni, ungadinga umakhenikha wosizo onentshisekelo kulo msebenzi.
Ake sithi ngisebenzisa ix20 enjinini encane engu-2231cc. Yimuphi umehluko ozokwenza ukuphehla umnotho nokuhlanza ikhabhoni?
Ukuhlanzwa kwekhabhoni yenjini esebenzayo kuphela okungasebenza. Vele ugcine ama-watts amancane, ama-amps nama-volts ama-2! Uma kukhiqizwa igesi ye-hydrogen eningi ngama-watts amperes angaphezu kwe-2V, kunokungqubuzana okusheshayo nomthetho we-thermodynamic kuzo zonke izinjini ezincane kanye nama-alternator angenakho ukonga uphethiloli.
Kungani uhambisa ezansi nge-5 noma i-XNUMX-speed automatic transmission?
Uma injini inamanani amagiya aphakeme kakhulu angama-4 noma ama-5, injini kadizili engu-2.2L kufanele isebenze ngokwezomnotho, cishe ngo-1300 RPM. Leli qhinga lisebenza futhi lihlangene nokungathathi hlangothi lapho ushayela ekwehleni. Hlala uhamba negiya eliphezulu nesivinini esiphansi kakhulu esilungele ukonga uphethiloli.
Ungayinqoba kanjani i-chip yekhompyutha emotweni?
Asiyikhohlisi i-ECU ngokusetshenziswa kukaphethiloli okungcono kakhulu emgwaqeni omkhulu. Sesifikile kwiLexus 3.9L / 100km ngokufaka inani elincane legesi yehho edalwe yi-iX300.
Amakhithi ethu we-HHO X-Cell asebenza ngama-mAMPs aphansi kakhulu angama-300, anobungani nomthetho we-thermodynamic. Kunconywe ukuthi uhlanze noma ufake ezinye izinzwa esikhundleni esingesihle. Cishe njalo, kunokuvuza kuphela ngaphansi kwama-washer kuma-injectors, okuzosiza kakhulu ukusebenzisa igesi le-hydrogen ukonga okuphezulu ngemuva kokulungiswa.
Bukela ividiyo lapha www.ukucweb.com or www.USHEMKHALA.com.
Uma ushayela edolobheni ngokukhishwa okuphezulu kwegesi ye-HHO ukunciphisa kangcono ukukhishwa, ama-CHIP wethu amasha anganciphisa kakhulu ukusetshenziswa kukaphethiloli kuze kufike ku-15 - 20%. Cela eminye imininingwane ngokuxoxa noma ifomu lokuxhumana.
Ingabe kungcono ukusetha i-Amp mean yamanje ngaphezulu kwe-5-10-15-30A ukonga uphethiloli?
Sihlolisise ama-generator amaningi e-hydrogen anezingcwecwe ezingathathi hlangothi, njenge-HHO DRY CELL, ngokufaka okungaphezu kuka-15A no-30A 50A ngaphandle kwamarekhodi abalulekile okonga uphethiloli. Ukususa amapuleti angathathi hlangothi bese usetha amandla wamanje, kungasetshenziswa uphethiloli ongcono kakhulu ngamandla amaningi. Lalela wonke umuntu, iqhinga lokonga uphethiloli akukhona ukwephula umthetho we-thermodynamics. Awusoze wonga uphethiloli omningi uma usebenzisa ama-amperes amaningi (amanje) avela ku-alternator.
Kungani amanzi e-bubbler ebuyela ethangini lamanzi lapho injini ivaliwe?
Imvamisa, lapho injini icishiwe, amanzi e-bubbler abuyela ethangini lamanzi. Kukhona i-vacuum encane, ngakho-ke amanzi we-bubbler abuyiselwa emuva kuyunithi enkulu. I-Bubbler yenzelwe ikakhulukazi izimo zokushisa ezifana ne-DRY CELL. Endabeni ye-HHO, i-X-CELL ayidingekile, kepha uma kwenzeka umthunzi ungama-50 ° C, njengasempumalanga emaphakathi, i-bubbler yawo igcwaliswa ngokushesha okukhulu ngokuhwamuka amanzi ashubile. Ngakho-ke umsebenzi wesipele ubalulekile njalo lapho injini icishiwe.
Abathengisi abaningi be-HHO bathi, ngaphandle kobufakazi bokuthi basebenzisa uphethroli omncane (kungaba ngomshini noma ngogesi ngokushintsha i-voltage ku-1V) lapho bekopela inzwa ye-oxygen.
Yebo, uzoba nophethiloli omncane kepha ungathathi hlangothi kuphela, futhi injini izofa ngenkathi ishaja ibhethri elidala nge-alternator endala kakhulu kanye nawo wonke amanye amadivayisi emotweni. Lokhu kuqhubeka ukukhishwa okungu-2-4 okuphindwe kabili futhi kuzoba kubi ngisho nakuma-gaskets ekhanda ngenxa yomlilo onganele. Uma ushayela, udinga ama-revs amaningi ngoba kukhona amandla amancane atholakalayo, ngakho-ke uthola ukusetshenziswa okufanayo kaphethiloli ngokusebenza okubi kakhulu nokusika isikhathi sempilo yenjini. Ukuphatha inzwa yeLambda kunengqondo kuphela uma unomthombo ozimele we-Hydrogen emsulwa (noma i-LPG) ngaphandle kokusebenzisa amandla ayi-100% adingekayo ukukhiqiza igesi.
Ungakuthola kanjani ukusetshenziswa kukaphethiloli okuhle kakhulu?
Kulula ukwenza uphethiloli ongcono kakhulu. Vele uye ezihlolweni nakumawashi kudeshibhodi yomnotho ongcono kakhulu. Ikhompyutha izokukhombisa ukuthi ushayela kanjani, okuhle nokubi. Nqamula wonke amadivayisi kagesi, afaka amalambu nabalandeli. Ukuze irekhodi elihle kakhulu lisehlobo, kepha uma ubusika ungabala -1,5l. Ungakhohlisi i-ECU noma i-lambda! Gcina ikhwalithi kaphethiloli ekusebenzeni okuphezulu nge-HHO X-CELL.
Ngabe i-HHO gas inawo umthelela ku-sensor oxygen sensor?
Hhayi ngoba ukushisa kwe-Hydrogen ne-oxygen kukhiqiza kuphela amanzi angenawo umoya-mpilo ngaphandle kwe-oxygen.
Ngabe uhlelo lwamafutha lwe-hybrid luthanda kakhulu ukugqwala noma ukugqwala?
Cha. Amafutha wezinsalela akhiqiza ukushisa okwanele ngesikhathi somlilo ukuze kuphefumule i-Hydrogen njengoba ibuyela emanzini futhi iphuma ohlelweni lokukhipha.
Ingabe lolu hlelo lukaphethiloli lwe-hybrid lungakhulisa amandla enjini?
Yebo, ukufaka i-Hydrogen enjinini yomlilo yangaphakathi kuzosiza ukuhlanza izingxenye lapho injini isebenza. Lokhu kuzokhulisa i-torque namandla wehhashi futhi kunciphise ukungcoliswa kwe-hydrocarbon okwamanje okukhishelwa emoyeni ngokukhipha kwakho. I-Hydrogen isha kangcono futhi ihlanzekile kunegesi noma udizili ongaphakathi kwenjini yakho. Lokhu kwenza ukuthi imoto yakho isebenze ngokushelelayo, isikhathi eside, ithule, futhi isebenze kangcono kunanini ngaphambili.
Ngabe isebenza ngezimoto ezingama-Diesel, Petrol?
Yebo, i-HHO isebenza nazo zonke izimoto ezinezinjini zangaphakathi zomlilo.
Ngabe i-hydrogen HHO generator idala noma iyiphi iphutha elifushane noma lesikhathi eside enjini?
Cha, i-hydrogen HHO generator ayibangeli monakalo ezinjini.
Uhlobo luni lwesondlo oluhilelekile?
Gcwalisa ithangi lamanzi eline-ionised ngamanzi acwecwe noma asuswe ion njengoba kudingeka. Njalo ngamakhilomitha ayi-1000-3000, uzodinga ilitha elilodwa lamanzi asuswe i-de-ionised / distilled futhi asikho isidingo sokwengeza i-KOH electrolyte eningi. Akunasidingo sokunakekelwa, futhi ikhithi isilungele ukufika ku -1 ° C.
Yini i-electrolyte esetshenziswayo?
I-electrolyte ehamba phambili yi-KOH (Potassium Hydroxide). Eshibhile kakhulu futhi kulula ukuyithola.
Kuthiwani uma ngingawusebenzisi amanzi angenawo amandla we-de-ionised noma acolisisiwe ku-generator?
Ezinye izinhlobo zamanzi ezinjengamanzi ompompi, amanzi amaminerali, amanzi echibini, amanzi olwandle, njll., Azosebenza. Noma kunjalo, zizophinda futhi zidale ukuthi i-electrolyte ibe "nodaka" ngenxa yamaminerali amanzi nokungcola. I-electrolyte enodaka izokwakha phezu kwamapuleti e-generator futhi isebenze njenge-insulator eyenza ukukhiqizwa kwegesi ye-Hydrogen kuhlupheke.
Kuyafana nakwezinye izinto eziningi ezihehayo, ikakhulukazi noma iyiphi i-catalyst equkethe i-sodium, njenge-baking soda noma i-sodium hydroxide. Isodium izongcolisa ngokushesha amapuleti e-electrolyser futhi yenze ukuthi iyunithi ingasebenzi.
Ingabe i-hydrogen generator ingaqhuma?
Cha. Ukukhiqizwa kwe-Hydrogen kwenziwa ngokufunwa kakhulu. Uzoba negesi yeHydrogen HHO kuphela lapho imoto yakho ihamba. Ngokungafani namathangi kagesi acindezelweyo, kunenani elincane kuphela lomfutho we-hydrogen ohlelweni.
Uma kwenzeka ngiba nemibuzo, ngabe kukhona ukusekelwa kobuchwepheshe kwe-Hydrogen HHO Generator yami?
Yebo, ukuxhaswa kwe-HHO kuhlinzekelwe kukhiqizwa wegesi weHHO KIT HHO setha i-HHO.
Endabeni yengozi, ingabe i-Hydrogen HHO Generator izoqhuma?
Lutho neze. Konke onakho ngamanzi ne-electrolyte phansi.
Ngabe i-Hydrogen HHO Generator ingasetshenziswa ku-generator yamandla kagesi?
Umkhiqizi we-iX HHO angasetshenziswa kunoma iyiphi i-generator yamandla kagesi.
Yini imikhiqizo yokuphila?
Kuze kube manje, sinamayunithi athengisiwe iminyaka emihlanu isasebenza.
Uyabahlinzeka abathengisi nabasabalalisi?
Yebo, uma unentshisekelo yokuba ngumthengisi / umsabalalisi ofanelekayo, xhumana nathi.
Kungani ama-plug-n-play hydrogen kits akho abiza kancane kunezimbangi?
Kungenxa yokuthi sithuthukise senza zonke izingxenye zethu ze-HHO.
Ngingayisebenzisa yini i-All-In-One enkulu ye-HHO KIT HHO esetha i-HHO gas generator emotweni yami?
Yebo, ungayilinganisa imodeli engenhla yemoto ngayinye. Isikhathi sokuphila se-HHO generator sizokwanda kakhulu.
Yimaphi amadivayisi okuphepha akuma-hydrogen generator kits?
Sithuthukise i-ix bubble yangaphakathi nangaphandle enenzwa yokuchichima kanye ne-valve engabuyisi kukhithi ye-iX HHO ukuvikela noma yimuphi umonakalo uma kwenzeka injini ihluleka. I-bubbler ibuye ibambe yonke iminonjana yomusi ophuma kwigesi efakwa enjinini.
Ngingawasebenzisa yini amanzi avela echibini?
Kunconywa ukuthi usebenzise amanzi angenawo-ionised noma afuthwe amanzi. Sivivinye amanzi okuphuza, amanzi avela echibini-emfuleni nobhiya. Bukela ividiyo lapha.
Nge-All-In-One iX HHO KIt Plug-N-Play, ngidinga ukuhlola izinga lamanzi ethangini njalo?
Ngenxa yama-LED kudeshibhodi, uyabona uma kukhona amanzi ngaphakathi noma cha. Ibanga lesikhathi phakathi kokugcwalisa amanzi cishe ngu-3000-7000 km.
Ngabe ukufaka i-HHO KIT HHO kuzosetha i-HHO igesi engenayo iwaranti yemoto noma umshuwalense?
Cha. Yinsiza ye-All-In-One Plug-N-Play engangehliswa kalula. Ngoba injini noma ikhompyutha ayikashintshi kusuka kumasethingi efektri yemoto, isethi yakho ye-All-In-One iX HHO KIT Plug-N-Play HHO gas generator ayisusi iwaranti noma umshuwalense wakho.
Ngiyithola nini incwadi yami yemiyalo?
Uthola ukufinyelela kumakhasi wokulanda ama-manuals ngokushesha mahhala. Uma udinga usizo olwengeziwe noma iseluleko, vele uxoxe nathi noma usithumelele i-imeyili.
Ngabe umjovo wegesi weHHO usebenza ezimotweni ezineTurbo?
Yebo. Ama-generator we-All-In-One iX HHO KIT Plug-N-Play HHO asebenza nezinjini ze-turbo. Vele uqiniseke ukuthi ujova igesi ye-HHO ngaphambi kweTurbo, hhayi ngemuva.
Siyini isimo se-oda lami?
Uma usufake i-oda lakho, sizokuthumela i-imeyili yokuqinisekisa ukulandelela isimo se-oda lakho. Uma i-oda lakho selithunyelwe sizokuthumela enye i-imeyili kanye nesixhumanisi sokulandela i-oda lakho. Noma, ungalandelela isimo se-oda lakho esigabeni sakho "somlando we-oda" ekhasini lakho le-akhawunti kuwebhusayithi.
Ngingakwazi ukuguqula i-oda lami?
Singashintsha kuphela ama-oda angakasetshenzelwa ukuthunyelwa kuze kube manje. Ukuze wenze ushintsho ku-oda lakho, sicela welule isandla ukusekela ngokuthumela isicelo sakho ngefomu "lokuxhumana nathi".
Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo?
Ungathenga kuwebhusayithi yethu usebenzisa i-VISA, MASTER, AMEX, MAESTRO debit, ikhadi lesikweletu, ukubhenka nge-net noma i-UPI. Ngokwengeziwe, sisekela i-Shop Pay, i-Apple Pay, i-Google Pay, nezinye izikhwama. Ungakhetha lezi zindlela zokukhokha ekuphumeni.
Yebo, siyazamukela izimbuyiselo ngokuya ngokufezeka kwale mibandela elandelayo: - Into kufanele ngabe ithengiswe esitolo sethu esiku-inthanethi - Into leyo bekungafanele isetshenziswe nganoma iyiphi indlela - Into kufanele ibe nokupakishwa kwayo kwasekuqaleni nawo wonke amathegi njll. - Isicelo sokubuyisa noma sokushintshisana senziwa zingakapheli izinsuku eziyi-7 silethisiwe. Ukucela ukubuyiselwa imali, sicela welule isandla ukuxhasa isicelo sakho ngokuthumela ifomu elithi "xhumana nathi". Ilungu labasebenzi bethu abasekelayo lizophendula ngokushesha okukhulu.
Ngingakwazi ukushintshanisa into?
Siyakwamukela ukushintshana futhi balandela imibandela efanayo nembuyiselo. - Le nto kumele ngabe ithengiswe esitolo sethu esiku-inthanethi - Into leyo bekungafanele isetshenziswe nganoma iyiphi indlela - Into kufanele ibe nayo emaphaketheni ayo oqobo nawo wonke amathegi njll. - Isicelo sokubuyisa noma sokushintshisana senziwa zingakapheli izinsuku ezingama-30 ukulethwa Ukucela ukushintshaniswa, sicela uthumele isicelo sakho ngefomu "xhumana nathi". Ilungu labasebenzi bethu abasekelayo lizophendula ngokushesha okukhulu.
Ngabe wenza ukuhambisa ngosuku olufanayo?
Senza ukuthunyelwa kosuku olufanayo uma ngabe ufaka i-oda lakho ngaphambi kuka-12 emini ngalolo suku.
Njengamanje sithumela e-EU, e-United States, eCanada, e-Australia, e-UK nasemhlabeni wonke.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthumela i-oda lami?
Izikhathi zokulethwa zingahluka ngokuya ngendawo yokulethwa kanye nohlobo lomkhiqizo oyi-odwa. Imvamisa, uma usufake i-oda lakho, imvamisa kuthatha amahora angama-24 kuye kwangama-36 ukuyicubungula nokumaka ukuthi ilungele ukulethwa.
Ngikulandelela kanjani ukuqhubeka kwenqubo?
Uma i-oda lakho selithunyelwe, uzothola i-imeyili nesaziso sombhalo esinemininingwane ye-oda. Ungalandelela ukuthunyelwa ngokuchofoza kusixhumanisi esinikezwe ku-imeyili.
Ngingakwazi ukushintsha ikheli lami lokuletha ngemuva kokufaka i-oda lami?
Uma i-oda lakho lingathunyelwe okwamanje, lapho-ke singathumela ekhelini elihlukile ngokwesicelo sakho. Ukwazi ngokuqhubekayo, ungaxhumana nathi ngefomu 'lokuxhumana nathi'.
Kuphephile ukusebenzisa ikhadi lami lesikweletu / lasebhange kule webhusayithi?
Sisebenzisa izinsizakalo zokucubungula izinkokhelo ezivela eceleni ukucubungula konke okwenziwayo kokukhokha kwekhadi lesikweletu / lasebhange. Laba baxhumanisi bokukhokha bahambisana ne-PCI, okuyizinga eliqinile kunawo wonke lesitifiketi esiqinisekisa ukuthi yonke imininingwane yabanikazi bamakhadi iyagcinwa, icutshungulwe futhi idluliswe ngokuphepha ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokubethela okujwayelekile embonini.
Okwamanje sisekela kuphela imali elandelayo yokukhokhisa amakhasimende ethu ngezimali zawo zasendaweni: i-USD, i-CAD ne-EUR. Uma ikhadi lakho lesikweletu noma lasebhange lisebenzisa enye imali, uzokhokhiswa nge-USD, i-CAD noma i-EUR, kuya ngewebhusayithi okuyo. Ibhange lakho lingasebenzisa inani lokuguqulwa elihambisanayo lwemali oyikhethayo njengenqubomgomo yabo. Sicela ubuze ebhange lakho ukuthola izindleko eziqondile.
Sinikezela ngokushintshaniswa kwezinto kuphela ngokweNqubomgomo yethu yokushintshana. Ngaphambi kokufaka i-oda siphakamisa ukuthi ufunde inqubomgomo yethu yokuthumela nokubuyisa / yokushintshanisa.
Ingabe ukubuyisa kumahhala?
Yebo e-Ireland, ukuze uthole eminye imininingwane sicela ufunde inqubomgomo yethu yokubuyisa neyokushintshisana. Noma Zizwe ukhululekile ukuxhumana nabasizi bethu nge-imeyili noma uxhumane nathi ifomu ukuthola eminye imininingwane.
Ingabe unikela ngohlelo lokudlulisela? Isebenza kanjani?
Senze uhlelo lokudlulisela phambili ukubonga amakhasimende ethu ngokudlulisa abangane nemindeni yabo. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke imigomo nemibandela yohlelo lwethu lokudlulisela.
Ingabe ikhona iwaranti?
Siqinisekisa noma imuphi umkhiqizo wethu we-plug-n-play owenziwe yithi futhi owathengiswa esitolo sethu esiku-inthanethi ukuze ungabi nasici.
Ngixhumana kanjani nensizakalo yamakhasimende?
Ithimba lethu lenkonzo yamakhasimende liyatholakala kulo lonke isonto, zonke izinsuku eziyisikhombisa kusukela ngo-8 ekuseni kuya ku-6 ntambama. Ungasithola ku-imeyili.
Ngingakwazi ukusebenzisa amakhuphoni amaningi entengisweni efanayo?
Isigqebhezana esisodwa kuphela esingasetshenziswa kuthengiselwano olulodwa noma enqoleni. Ungangeza izinto eziningi enqoleni eyodwa ukusebenzisa isigqebhezana esisodwa futhi uthole izaphulelo.
Umbuzo osheshayo - Impendulo esheshayo
Ukusheshisa ukufunda impendulo esheshayo evela ku-HHO FACTORY, Ltd, hlola isihlungi sakho se-imeyili.